Ny fahatokisana no vola vaovao manerantany ho an'ny Travel and fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fahatokisana no vola vaovao manerantany ho an'ny Travel and fizahan-tany
ITB Berlin Now dia nisokatra saika ary ny dinika voalohany dia ny amin'ny endrik'ilay dia sy fizahantany aorian'ny COVID-19
"Ny fitokisana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanapahan-kevitra momba ny dia amin'ny taona 2021", hoy i Christian Smart, tale jeneralin'ny Travelzoo, tao amin'ny fivoriambe ITB Berlin IZAO. Nandritra izay enin-taona lasa izay, niara-niasa tamin'ny ITB Berlin, Travelzoo dia nanao fanadihadiana momba ny fironana amin'ny dia. Tamin'ity indray mitoraka ity ny lohahevitra dia hoe "inona no misy fiatraikany amin'ny fividianana fanapahan-kevitra amin'ny fotoanan'ny krizy?" Araka ny voalazan'ny Smart, mazava fa nitana andraikitra lehibe hatrany ny fifampitokisana - ary afaka misitraka izany ny sehatry ny fizahan-tany. "Ny fifampitokisana dia vola manerantany." Maneran-tany, 83 isan-jaton'ny valinteny no nilaza fa ny fahaizana matoky olona sy orinasa no zava-dehibe indrindra amin'izy ireo. Ny zokiolona dia vao mainka marina izany fanambarana izany.
Anisan'ny Alemanina, ny fahatokisana ny marika fitsangatsanganana dia miorina amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Zava-dehibe toy ny manome lanja ny mpanjifa sy ny lazany ny marika. Ho an'ny mpanjifa, ny zava-dehibe indrindra dia ny fahaizana manamboatra indray na mamerina ny volan'ny olona iray fotoana fohy alohan'ny dia. Ny fitandremana ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana dia zava-dehibe ihany koa. Anisan'ireo namaly, ny fahafantarana ny toerana hahatongavany ho “azo antoka” dia ny fahadimy ihany.
73 isanjaton'ny Alemanina no handany bebe kokoa raha afaka mahazo antoka fa azo itokisana serivisy na entana. "Ny fahalefahana sy ny fahatokisana no antony lehibe mahatonga ny famandrihana fialantsasatra", hoy i Christian Smart. "Izany no antony mahatonga ny mpandraharaha mpizahatany afaka manome safidy mora vidy sy vidiny vaovao."
Inona avy ireo antony hafa mahatonga ny fahatokisana ireo marika fitsangatsanganana? Voalohany dia misy serivisy ho an'ny mpanjifa mora azo (42 isan-jato), arahin'ny lanjan'ny mpanjifa (33 isan-jato) ary ny lazan'ny marika fitsangatsanganana (31 isan-jato). Efatra isan-jaton'ireo namaly ihany no nilaza fa nisy fiantraikany tamin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo izany. 33 isan-jato no natoky ny hevitry ny fianakaviana sy ny namana ary ny 24 isan-jaton'ireo vavahady naoty.
Hevitra feno faniriana ao amin'ny ITB momba ny fizahan-tany amin'ny fialantsasatry ny paska